ကျူးကျော်ရပ်ကွက်က အထမ်းသမားရဲ့သား ဘဝမှ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ “ဂျက်လီ” ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း - Myitter
August 27, 2019 Myitter နိုင်ငံတကာသတင်း 0
အတန်းကျောင်း–၂–တန်းပဲ တက်ခဲ့ရပေမယ့် အာရှရဲ့ –သရုပ်ဆောင် ဘုရင်—#JET_LI—အကြောင်း-
( ၂၁ရာစုကမ္ဘာ့သြဇာအကြီးဆုံးသရုပ် ဆောင်၁၀၀ထဲမှတစ်ဦး (သို့) အာရှရဲ့ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်နေသောမင်းသားများထဲမှတစ်ဦး(သို့)ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှ ရတနာတခုရဲ့အတ္ထုပတ္တိ )
. “လူတွေကိုရယ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်မှာမျက်ရည်တွေပေးဆပ်ထားရတယ်။ကိုယ်ငိုပြမှ လူတွေရယ်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်လောက်လောကမှာခက်တာမရှိဘူး”
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ရက်နေ့။
အခြေအနေရော အချိန်အခါရောအဆိုးဖက်မှာရှိနေချိန် မိသားစုစားဝတ်နေရေးခက်ခဲမူကိုလွန်ပြီး တနေ့ထမင်း၂နှပ်တောင်နပ်မှန်အောင်ရုန်းကုန်နေရတဲ့အချိန် တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့စွန် စစ်တပ်ကချပေးထားတဲ့ကျူးကျော်တွေအတွက်ရက်ကွက်တခုမှာ သူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်
ဖခင်ဖြစ်သူကုန်ထမ်းသမား ဆိုင်းဘုတ်စာလုံးရေးသူတယောက်ထဲရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ မိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုမနည်းဖြေရှင်းရဖို့ကတော်ရုံတော့မလွယ်ကူလှဘူး
သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ဘူး။ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ကနေ မုဆိုးမမိခင်ရဲ့သားဘဝကနေ ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့သြဇာအရှိဆုံးသရုပ်ဆောင်အယောက်၁၀၀ထဲ အာရှရုပ်ရှင်လောကရဲ့အတော်ဆုံးမင်းသား၅ယောက်စာရင်းထဲကို ၂၁ရာစုမှာဝင်လာမယ့် ဂျက်လီဆိုတဲ့လူပါပဲ
” သုညနဲ့စတာ ဝမ်းနည်းစရာလူမဟုတ်ဘူး။ သုညနဲ့စတယ်ဆိုပြီးထိုင်ငိုကြွေးနေမှ ဝမ်းနည်းစရာလူ”
” အဖေ့မျက်နှာကိုကျတော်မမှတ်မိဘူး။ အဖေဘယ်လိုလူမှန်းလဲကျတော်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့်အဖေဟာကျတော့်အတွက်တော့ ကိုယ်တိုင်မမြင်ဖူးပေမယ့် အမြဲရင်ထဲမှာကိန်းအောင်းနေတဲ့ဘုရားတဆူလိုပဲ။ ဒါတခြားလူတွေအတွက်တော့မနှိုင်းစရာလို့မြင်လိမ့်မယ်။ ကျတော့အတွက်တော့အဖေ့ဓာတ်ပုံက ဒုတိယဘုရားပါပဲ။ ”
ဒါပေမယ့်သူမညံ့ဘူး။ရက်ကွက်ထဲကစာသင်ဝိုင်းကိုသူအမြဲသွားနားထောင်တတ်သလို သူ့အသက်၇ နှစ်မှာ မူလတန်း ဖတ်စာအုပ် အကုန်လုံးကို သူအလွှတ်ရနေပြီ ။ သားဖြစ်သူစာတော်တာသိပေမယ့်မိခင်ဖြစ်သူဟာ ကျောင်းမထားနိုင်တဲ့ အတွက် ရင်နာရတာက လွဲရင် ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး
ဒါကြောင့် သူ့သားကို ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်မယ့်အစား ဘာသာရေး အဆုံးအမတွေကို မိခင်ဖြစ်သူဟာညတိုင်း ဖတ်ပြခဲ့ ပါတယ်
ဒါကြောင့်လဲ သူဟာကျောင်းမနေရပေမယ့် ကျောင်းနေရတဲ့ ကလေးတွေထက် ပိုသိ ပိုတော်ခဲ့တယ်သူက ဟာသဉာဏ်လဲ အရမ်းရွှင်တယ် ။
သူက ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူချစ်လူခင် ပေါသလို သူ့ရဲ့ အမြဲပြုံးနေတတ်တဲ့ သူ့မျက်နှာလေးကို ချစ်လို့သူ့ကို အမြဲ စားစရာ ဝတ်စရာတွေ ပေးတတ်ကြတယ်
ဒါကြောင့်လဲ သူ့မိသားစုဟာ အစားအသောက် ချောင်လည်ခဲ့ သလို မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အပ်ချုပ်လို့ ရတဲ့ငွေကလဲ အိမ်အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ခဲ့တယ်
သူက ထူးခြားတယ် ။ သု့ထက် အင်အားကြီးတဲ့သူတွေ သူ့ကို အနိုင်ကျင့်ရင်တောင် အပြုံးနဲ့ အမြဲတုန့်ပြန် တတ်တယ် သူကျောင်းမနေရ ပေမယ့် သူ့ညီမတွေကို ကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့ အသက် ၁၀ နှစ် ကောင်လေးက ရုန်းကန်ခဲ့တယ်
သူ့မောင်နှမတွေ ကျောင်းတက်ခဲ့ရတယ် ။ သူမနေရပေမယ့် သူ့ညီမလေးတွေ ကျောင်းတက်ရလို့ သူအမြဲပျော်ပြီး ရပ်ကွက်ထဲ သူ့ညီမစာတော်တဲ့အကြောင်း အမြဲကြွားလုံးထုတ်တတ်တဲ့ ကိုလေလုံးပေါ့
ဒီလို သူပျော်နေလေ မိခင်ဖြစ်သူက ခံစားရလေ နောက်ဆုံးသူ့ကို မိခင်ဖြစ်သူက ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းကို ပို့ခဲ့ပါတော့တယ် ။
” မိသားစုထက် နင့်ကိုယ်နင်လဲ ဘဝမှာ ပျော်အောင် ရုန်းကန်ရမယ် ။ နင် လူတော်မဖြစ်ရင်တောင်လူဆိုး တယောက်တော့ ငါအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး ။ နင့်အတွက်ပဲနင်တွေးပါ ။ ”
” အမေ့ရဲ့ အဲ့ဒီအချိန်ကစကားကို ကျတော်ခုထပ်ထိမှတ်မိသေးတယ်
မှတ်မှတ်ရရ ပေါ့ကျတော် ဆရာတော်ဆီမရောက်ခင်ညမှာပေါ့
အမေကသူငိုတာကို သားသမီးတွေကို ဘယ်တော့မှ မသိစေချင်တဲ့လူ
သားသမီးတွေရှေ့မှာ အမေက အမြဲတမ်း ရှေ့တန်းကစစ်သူကြီးတယောက်လို မျက်နှာထားနဲ့ပဲ ဆုံးမ ပေးတတ်တယ်ဗျ ။
ဒီကျောင်းကကောင်းတယ် ။ သင်တန်းမှာတော်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မိသားစုကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးတယ် ။
#ဂျက်လီဟာသိုင်းပညာမှ ငယ်စဉ်ထဲက ထူးချွန်ခဲ့သလို သူ့လက်ဦးဆရာတော်ကြီးကပါ အံ့သြခဲ့ရတဲ့ကလေး တယောက်ပါ ။ ၁၃နှစ်သားမှာ အလတ်တန်း သိုင်းကျမ်းစာအုပ် ၁၈ အုပ်ကို သူတတ်ခဲ့ပြီ ။ဒါက ကလေးတယောက်အဖို့ တော်တော်မလွယ်တဲ့ ကိစ္စကြီးပါ ။
ညီမဖြစ်သူကို ကျောင်းကောင်းကောင်း ပြောင်းထားချင်လို့ ဂျက်လီဟာသိုင်းသင်တန်းကခွင့်မပြုတဲ့သိုင်းပြိူင်ပွဲတွေကို ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူဆုတွေရတယ် ။ ဒါကြောင့်လဲဆရာတော်ရဲ့ကြိမ်လုံးကသူ့အတွက်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ သလို ဆရာတော်ကမနိုင်တဲ့အဆုံး သိုင်းပြကွက် ပြိုင်ပွဲတွေကို ဂျက်လီအားဝင်ပြိုင်ခိုင်းစေခဲ့ပါ တော့တယ် ။ သူအဲ့မှာလဲဆုတွေရတယ် ။
သူတို့ဘုန်းကြီး ကျောင်းကိုရုပ်ရှင်အဖွဲ့တွေလာရိုက်ကြတယ်။နဂိုထဲကဟာသဉာဏ်ရွှင်တဲ့ဂျက်လီကအပြေးအလွှားကြည့်ခဲ့တယ်။သူဘာဖြစ်ချင်မှန်းသူ့ကိုယ်သူမသိတဲ့ဂျက်လီဟာ ဟာသသရုပ်ဆောင်တယောက်အိမ်မက်ကိုမက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
သူဟာသမင်းသားအရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့ပြီ။ ချာလီချာပလင်နဲ့နေးမတ်ကိုအရမ်းရူးသွပ်တဲ့သူက ရုပ်ရှင်ပိုးထည့်ပေးဖို့ဒီရိုက်ကွင်းကစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီအချိန်မှာဟောင်ကောင်မှာသူအရမ်းအားကျတဲ့သူတ ယောက်ကလဲလူမသိသူမသိနေရာကနေဟာသအက်ရှင်လေးတွေပါနေရပြီ။သူအားကျတဲ့သူကကတော့တခြားသူမဟုတ်ဘူး ဂျက်ကီချမ်းဆိုတဲ့ရိုက်ကွင်းကတောက်တိုမယ်ရကောင်အဆင့်ပဲရှိသေးတဲ့သူပါပဲ။
#ဂျက်ကီချမ်းဆိုတာဘာကောင်မှန်းလူတွေမသိသေးခင်အတိုအစဘဝထဲကဂျက်ကီချမ်းက ဂျက်လီရဲ့ Idolတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲ#ဂျက်လီဟာ ရုပ်ရှင်လောကထဲကိုတိုးဖို့ဆရာတော်နဲ့မိခင်အတွက်စာတစောင်ချန်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကနေခိုးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
” အမေ သားအတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့သားဘာဖြစ်ချင်လဲသိပြီအမေပြောတဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့တနေ့အမေ့ကိုကျတော်လာရှာပါ့မယ်”
ဒီစာလေးဟာယနေ့အချိန်ထိအမေရိက ကဂျက်လီရဲ့နေအိမ်မှာကပ်ထားဆဲပါ။သူစပြီးရောက်လာတာက ဟောင်ကောင်မြိူ့ပေါ်။သူဘာလုပ်လဲဆို ရုပ်ရှင်အဖွဲ့တခုကစက်အထမ်းသမားဒီကနေ စတန့်အစားထိုးသမားတယောက်အဖြစ်သူနေရာရလာခဲ့တယ်။
သူ့ရဲ့Talentကိုမြင်သွားတဲ့သူက သိုင်းကားတွေရိုက်တဲ့ချောင်ရှီရန်ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာတယောက်။ဒီအချိန်မှာသူ့အသက်၁၇ပဲရှိသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဗီဒီယိုကား၂ကားကိုသူနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမယ့်ရာဇဝင်ကား။လူမသိပဲပြီးသွားတယ်။ဒါပေမယ့်ချောင်ရှီရန်ကဇွဲမလျော့ဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆို သူ့ကိုကန်ထုတ်လိုက်ပြီးတခြားဒါရိုက်တာတယောက်နဲ့မင်းသားတ ယောက်ကိုနေရာပေးခဲ့တဲ့ Shoungshim ဆိုတဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကိုသူအနိုင်ရချင်တယ်။ဒါကြောင့် ဂျက်လီကိုပဲသူမင်းသားတယောက်အဖြစ်တင်ပြီး The Shaolin Temple ဆိုတဲ့ကားကိုရိုက္ခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါကဂျက်လီရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်လာသလို ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၇သန်းအထိရခဲ့တဲ့ရှောင်လင်သိုင်းကားပါပဲ။
ဒီကားရိုက်တော့ဂျက်လီအသက်၁၉နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီသတင်းကတရုတ်ပြည်မကြီးအထိတက်ခဲ့သလို မိခင်ဖြစ်သူဟာလဲအံ့သြခဲ့ရပါတယ်။ဒီကားကရတဲ့ငွေနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကိုTV တလုံးဝယ်ပေးခဲ့သလိုအိမ်ခန်းခအကြွေးတွေကိုလဲသူဆပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကားအပြီးမှာပဲ ချောင်ရှီရန်ကဂျက်လီကို ဒုတိယကားဆက်ရိုက်ဖို့လုပ်ပြန်တယ်။ဂျက်လီကဟာသ မင်းသားပဲဖြစ်ချင်တာ။ဒါပေမယ့်သူရတဲ့ နေရာကနေဘယ်လိုcharacterဖြစ်ဖြစ်သရုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်လို့သူ့ဆရာချောင်ရှီရန်ကအမြဲဆုံးမလေ့ရှိတယ်။
” မင်းသားဖြစ်ဖို့ကလွယ်တယ် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့က ခက်တယ် ။ ပိုက်ဆံ+ရုပ်+ အဓိကနေရာ ဒီ ၃ ခုပေါင်းရင်မင်းသားဖြစ်နိုင် ပေမယ့် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ကတော့ ဒီထက်အဆ ၁၀၀ မကတဲ့အချက်တွေလိုအပ်တယ် ။ မင်းသားတွေပေါတဲ့ ခေတ်မှာသရုပ်ဆောင်တယောက်ပဲ ဖြစ်ချင်ပါသား ”
” ဒီစကားက ကျတော်ဒီနေ့ဂျက်လီဖြစ်လာဖို့အရေးပါဆုံးဆိုမမှားဘူးဗျ။ ဆရာ့ရဲ့စကားကကျတော် ဟာသ အရံ ဇာတ်ပို့ဗီလိန်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရဲဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ် ကျတော်မင်းသားဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျတော့်မှာမင်းသားဖြစ်ဖို့အချက်တွေအစထဲကမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်သရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့တော့ ယုံကြည်မူအမြဲရှိခဲ့တယ်။”
ဒုတိယကား Kids From Shoalin ကို၁၉၈၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာရုံတင်ခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ၂၂သန်းအထိရရှိခဲ့သလိုဂျက်လီဟာလဲ ရှောင်လင်ဘုန်းကြီးတယောက်ဇာတ်ရုပ်နဲ့လူသိများခဲ့ပါတယ်။ ဒီကားအပြီးမှာတော့ဂျက်လီဟာ ရုပ်ရှင်ကား၎ကားကိုစာချုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီကားတွေအပြီး The Master ကားရုံတင်အပြီးမှာတော့အဖြူအမည်းခေတ်ကတရုတ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Once Upon A Time In China ကားကြီးကိုရိုက်ဖို့ လူရွေးပွဲမှာဂျက်လီကိုအားလုံးကထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတဖက်မှာလဲဂျက်ကီချမ်းကဟာသစတန့်တွေနဲ့အာရှမှာနာမည် ကြီးနေချိန် ဂျက်လီကလဲ သိုင်းကားနယ်ပယ်မှာအာရှရဲ့King ဖြစ်လာဖို့ OUATIC ကားကြီးကို ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာရုံတင်ခဲ့ပါတယ်။
အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့သလိုOne Upon A Time In Chinaရဲ့နောက်ဆက်တွဲကားတွေကိုရိုက်ဖို့အထိပါစာချုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတော့တယ်။OUATIC ၃ကားအပြီးမှာတော့ဂျက်လီကို Hollywoodထိတက်စေဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒါကတော့ Once Upon A Time In China and America ကားကြီးပါပဲ။အမေရိကအထိသွားရိုက်ခဲ့သလို ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ဆုတွေပါရခဲ့ပါတယ်။ဒီကားအပြီးမှာတော့ဂျက်လီအားကျရတဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့စတီပင်ချောင် စီစဉ်တဲ့ Hit Man ကားကိုရိုက်ခွင့်ရခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီကားအပြီးမှာတော့ဂျက်လီကိုHollywoodကကမ်းလှမ်းလာတဲ့TheOne ကားကြီးကိုရိုက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီကားဟာ ဂျက်လီအဖို့အခက်ခဲဆုံးကားတကားလို့ပြောထားသလို အောင်မြင်မူကလဲအမေရီကန်ဒေါ်လာ ၇၅သန်းနီးပါးရခဲ့တဲ့ကားကြီးပါ။ ဒီကားဟာ ဂျက်လီကို အာရှမှာရော Hollywoodမှာပါထိပ်တန်းမင်းသားတယောက်ဖြစ်စေဖို့စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
” ဖြစ်ချင်တာကိုထိုင်မစောင့်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုအိပ်ချိန်မှာပဲမမက်နဲ့ဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ရမှာပျင်းတဲ့လူတွေကဖြစ်သင့်တာကိုလုပ်ကြသလိုအိမ်မက်ရှိတယ်ပြောပြောနေတတ်ပြီး အဲ့ဒီအိမ်မက်ကမနိုးရင်တော့ကိုယ်ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူး ”
ဒီကားအပြီးမှာတော့ဂျက်လီဟာတကမ္ဘာလုံးကိုအာရှသားတယောက်ကကိုင်လှုပ်ဖို့စတင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။Hollywood မှာ အာရှသားတွေအတွက် နေရာမပေးချင်ပေမယ့် အာရှကနေ Hollywood ကို တက်လာတဲ့ ဂျက်ကီချမ်း လို ရှာရွှတ်ခန်း လို ဂျက်လီလို မင်းသားတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့မူ ဒဏ်ကိုတော့ Hollywood က မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
Hollywood မှာနေရာရလာတဲ့အချိန်ပဲရှိသေးတယ်။ Hero ကားကြီးကို၂၀၀၂ခုနှစ်မှာရုံတင်လာခဲ့တယ်။ Hollywood ပြာသွားတယ်။ ဒေါ်လာသန်း ၁၇၇သန်းကျော်တဲ့အထိ ဝင်ငွေကမရပ်ဘူး ။ ဒီပုပုကောင်က ဘာလဲဟပေါ့ ။ သန်း ၃၀ လောက်ရင်းပြီး အသားတင် အမြတ်သန်း ၁၄၀ လောက်ရသွားတယ် Hero ကားက ။ ထူးခြားမူကဒီကားက Best ForeignLanguage Film ဆိုတဲ့Oscar ဆုကြီးကိုရခဲ့သလို ဆုကြီး၇ဆုအပြင် အင်္ဂလန်က ရုပ်ရှင်တက္ကသိုလ်ကြီးကနေ သင်ရိုးအဖြစ်ပါ ယူခဲ့ပါတော့တယ် ။
ဒါကအာရှရဲ့ပထမဆုံးအနောက်တိုင်းတက္ကသိုလ်တွေကနေ သင်ရိုးတောင်ယူရတဲ့အထိဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကားပါ ။ရှာရွတ်ခန်း ဂျက်ကီချမ်းတောင် မလုပ်ပြနိုင်သေးတဲ့ စံချိန်တခုကို ဂျက်လီက လုပ်ပြသွားတယ် ။ ဒီကားအပြီးမှာတော့ဂျက်လီကို Hollywood မင်းသားတွေနဲ့တွဲရိုက်ဖို့ EuropaCrop ကနေ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ ပြန်ပါတော့တယ် ။
၂၀၀၅ခုနှစ်မှာတော့ဂျက်လီကိုလုံးဝမထင်ထားတဲ့အကွက်ကြီးနဲ့ ကာရိုက်တာအဆန်းတခုနဲ့ Unleashed ကားကြီးရုံတင်လာတယ် ။ မိခင်မုဒိန်းကျင့်ခံရအသတ် ခံရတဲ့ကလေးတယောက်ဟာစိတ္တဇဖြစ်သွားပြီးအတိတ်မေ့Fighterတကောင်အသွင်အပြင်နဲ့ ခွေးတကောင်လိုသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကားပေါ့။
လည်ပတ်ဖြုတ်ပေးမှခိုင်းစေလို့ရသလိုလူဆိုတာဘာမှန်းမသိတဲ့Psychoသမားတယောက်ဘဝ ကိုပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သလို ဂီတကလူအရိုင်းအစိုင်းတွေကိုတောင်ယဉ်ကျေးသွားစေတယ်ဆိုတာကိုချပြထားတဲ့ကား။
ဒီကားဟာလဲအောင်မြင်မူကမသေးသလို ဂျက်လီရဲ့သြဇာကြီးမားမူကိုမရပ်တန့်စေခဲ့တဲ့ကားပါ။ တကားပြီးတကား ထွက်လာတယ်။ထွက်လာတိုင်းလဲပေါ့သေးသေးတကားမှမပါဘူး။ဂျက်လီဆိုရင် မကောင်းပါဘူးကွာလို့ပြောမယ့်သူမရှိသလောက်ပဲ။
ဒီကားအပြီးမှာတော့ ဂျက်လီဟာသူ့idol ကြီးဂျက်ကီချန်းနဲ့ရိုက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ The Forbidden Kingdom ကားကြီးကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာရုံတင်လာခဲ့ပါတယ်။ အမေရီကန်ဒေါ်လာ သန်း၁၅၀ကျော်ရခဲ့သလို ဒီပမာဏကမသေးလှပါဘူး။
Mummy : ဒီကားကနာမည်ရမင်းသားတယောက်က ဗီလိန်လုပ်ဖို့ဆိုလုပ်ချင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဂျက်လီဟာ Mummy ရဲ့ ကားအဆက်တကားဖြစ်တဲ့ Tomb of the Dragon Emperro ကားကြီးမှာလူဆိုးနေရာကနေပါခဲ့ပါတယ်။ သန်း၄၀၀ကျော်ရခဲ့ပြီးဒီကားဟာအာရှမင်းသားတွေထဲ ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရကားတကားအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။
” ဗီလိန်နေရာကိုကျတော်ကြိုက်တယ်။ဗီလိန်သရုပ်ဆောင်တွေကိုလဲကျတော်လေးစားမိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆို ရုပ်ရှင်ကားတကားမှာဗီလိန်နေရာကပညာအပေးနိုင်ဆုံးနေရာပဲ”
ဒီလိုဗီလိန်တွေ သိုင်းကားတွေအက်ရှင်တွေ အသတ်အပုတ်တွေချည်းရိုက်နေလို့အငိုအလွမ်းအဆွေးမိဘသရုပ်ဖော်မေတ္တာသရုပ်ဖော်နေရာရော ?Ocean Heaven : သမုဒ္ဒရာ ထက်ကြီးတဲ့မိဘရဲ့မေတ္တာတရားကိုချပြထားတဲ့ဂျက်လီ အထိုးအသတ်တကွက်မှမပါတဲ့အဖေတယောက်ရဲ့ဇာရုပ်။ အသည်းကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အဖေနေရာကနေ စိတ်မနှံ့တဲ့သားတို့ရဲ့ဘဝလောကဓံကိုထိုးသတ်ပြထားတဲ့ကားပါ။သူသေသွားရင် စိတ်မနှံ့တဲ့သားတယောက်လောကကြီးထဲဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့သားအပေါ်ချစ်တဲ့အချစ်ကိုပြသထားတဲ့ကားပါ။
ဒီကားဟာဂျက်လီကိုမထင်ထားစေတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေမြင်ခဲ့ရသလို တော်တော်လဲခွဲထွက်ထားတဲ့ကားပါ။ ဂျက်လီကားတွေတကားချင်းပြောနေရင်ပြီးမယ်တောင်မထင်ဘူး။ The Expendables မှာလဲHollywoodရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲကြီးတွေဖြစ်တဲ့အာနိုး ရမ်ဘိုတို့နဲ့တွဲသရုပ်ဆောင်ထားတာကြည့်ရုံနဲ့ဂျက်လီရဲ့ဖြစ်တည်မူကိုသိနိုင်ပြီပေါ့။နောက်လမှာထွက်မယ့် League of Gods ကားကလဲရုံမတင်ရသေးဘူးဟောင်ကောင်မှာပွဲဆူနေပြီ။ ဂျက်ကီချန်းနဲ့IP manကြီးတို့နဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ကားကြီးကလဲမကြာခင်လာတော့မယ်။
ဒါတင်မကသေးဘူး။ ၂၀၁၈မှာရိုက် မယ့် Fatherless Childကားကလဲသန်း၁၀၀အထိအကုန်ကျခံရိုက်ကူးနေပြီ။ xXx ရဲ့အဆက်မှာလဲ F&F ရဲ့ဂတုံးကြီး ဗင်ဒီဇယ်ရဲ့ရန်သူနေရာကနေပါဝင်လာတော့မယ် ။ ဂျက်လီဆိုရင်ဘာကားဖြစ်ဖြစ်စောင့်ကြည့်ရတဲ့အထိ ဒီကျူးကျော်ရပ်ကွက်ကကလေးတယောက်ကဖြစ်စေခဲ့ပါပြီ။
ဒီလျိုလျှင်ဂျီ ဆိုတဲ့ကောင်လေးတဖြစ်လဲဂျက်လီဆိုတဲ့မင်းသားဟာလက်ရှိအချိန်မှာအာရှရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားတယောက်ဖြစ်လာသလိုHollywood မင်းသားတွေထဲလဲအနေအထားမသေးတဲ့မင်းသားတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါတင်မကပါဘူး Asia ကိုယ်စားလှယ် WHO ရဲ့သံတမန်ဖြစ်သလို အာရှသိုင်းအဖွဲ့အစည်းရဲ့အနောက်နိုင်ငံသံတမန်တယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျက်လီFoundationကနေနှစ်စဉ်ပညာရေးထောက်ပံ့မူတွေ မိဘမဲ့ကလေးများစွာကိုပါထောက်ပံ့ပေးထားခဲ့ပါပြီ။ဂျက်လီဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ပီပီ အာရှနိုင်ငံတချိူ့မှာသူလှူထားခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီး ကျောင်းပေါင်း၂၀၀ကျော်အထိရှိထားသလိုဂျက်ကီချန်းလိုပဲ အာရှရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားကြီးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
Our actions determine
Our distiny ‘”
တချိန်က ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ကမုဆိုးမသားတယောက် မောင်နှမတွေအတွက်ကိုယ့်ဘဝကိုအနစ်မွန်းခံပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ကောင်လေးတယောက် ဘုန်းကြီးကျောင်း သိုင်းသင်တန်းကနေမအူမလည်နဲ့မင်းသားဖြစ်ချင်လို့မိုက်မိုက်ကမ်းကမ်းနဲ့မြိူ့ပေါ်ကလူလည်တွေကြားတက်လာခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်က လက်ရှိမှာကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး ၂၁ရာစု သရုပ်ဆောင်မင်းသား၁၀၀ထဲပါသွားခဲ့ပါပြီ။သုညကစပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ဂျက်လီဟာ တန်ဖိုးကြီးသရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
ကြူးကြျောရပျကှကျက အထမျးသမားရဲ့သား ဘဝမှ ကမ်ဘာ့ထိပျတနျး ရုပျရှငျသရုပျဆောငျဖွဈလာတဲ့ “ဂကျြလီ” ရဲ့ ဘဝဇာတျကွောငျး
အတနျးကြောငျး–၂–တနျးပဲ တကျခဲ့ရပမေယျ့ အာရှရဲ့ –သရုပျဆောငျ ဘုရငျ—#JET_LI—အကွောငျး-
( ၂၁ရာစုကမ်ဘာ့သွဇာအကွီးဆုံးသရုပျ ဆောငျ၁၀၀ထဲမှတဈဦး (သို့) အာရှရဲ့ထိပျဆုံးမှရပျတညျနသေောမငျးသားမြားထဲမှတဈဦး(သို့)ကြူးကြျောရပျကှကျမှ ရတနာတခုရဲ့အတ်ထုပတ်တိ )
. “လူတှကေိုရယျအောငျလုပျနတေဲ့လူတယောကျရဲ့နောကျမှာမကျြရညျတှပေေးဆပျထားရတယျ။ကိုယျငိုပွမှ လူတှရေယျအောငျလုပျရတဲ့အလုပျလောကျလောကမှာခကျတာမရှိဘူး”
အခွအေနရေော အခြိနျအခါရောအဆိုးဖကျမှာရှိနခြေိနျ မိသားစုစားဝတျနရေေးခကျခဲမူကိုလှနျပွီး တနထေ့မငျး၂နှပျတောငျနပျမှနျအောငျရုနျးကုနျနရေတဲ့အခြိနျ တရုတျနိုငျငံ ပကေငျြးမွို့စှနျ စဈတပျကခပြေးထားတဲ့ကြူးကြျောတှအေတှကျရကျကှကျတခုမှာ သူ့ကိုမှေးဖှားခဲ့ပါတယျ
ဖခငျဖွဈသူကုနျထမျးသမား ဆိုငျးဘုတျစာလုံးရေးသူတယောကျထဲရဲ့ဝငျငှနေဲ့ မိသားစုရဲ့စားဝတျနရေေးကိုမနညျးဖွရှေငျးရဖို့ကတျောရုံတော့မလှယျကူလှဘူး
သူကတော့တခွားသူမဟုတျဘူး။ ကြူးကြျောရပျကှကျကနေ မုဆိုးမမိခငျရဲ့သားဘဝကနေ ကမ်ဘာ့ရုပျရှငျလောကရဲ့သွဇာအရှိဆုံးသရုပျဆောငျအယောကျ၁၀၀ထဲ အာရှရုပျရှငျလောကရဲ့အတျောဆုံးမငျးသား၅ယောကျစာရငျးထဲကို ၂၁ရာစုမှာဝငျလာမယျ့ ဂကျြလီဆိုတဲ့လူပါပဲ
” သုညနဲ့စတာ ဝမျးနညျးစရာလူမဟုတျဘူး။ သုညနဲ့စတယျဆိုပွီးထိုငျငိုကွှေးနမှေ ဝမျးနညျးစရာလူ”
” အဖမေ့ကျြနှာကိုကတြျောမမှတျမိဘူး။ အဖဘေယျလိုလူမှနျးလဲကတြျောမသိဘူး။ ဒါပမေယျ့အဖဟောကတြေျာ့အတှကျတော့ ကိုယျတိုငျမမွငျဖူးပမေယျ့ အမွဲရငျထဲမှာကိနျးအောငျးနတေဲ့ဘုရားတဆူလိုပဲ။ ဒါတခွားလူတှအေတှကျတော့မနှိုငျးစရာလို့မွငျလိမျ့မယျ။ ကတြော့အတှကျတော့အဖဓေ့ာတျပုံက ဒုတိယဘုရားပါပဲ။ ”
ဒါပမေယျ့သူမညံ့ဘူး။ရကျကှကျထဲကစာသငျဝိုငျးကိုသူအမွဲသှားနားထောငျတတျသလို သူ့အသကျ၇ နှဈမှာ မူလတနျး ဖတျစာအုပျ အကုနျလုံးကို သူအလှတျရနပွေီ ။ သားဖွဈသူစာတျောတာသိပမေယျ့မိခငျဖွဈသူဟာ ကြောငျးမထားနိုငျတဲ့ အတှကျ ရငျနာရတာက လှဲရငျ ဘာမှ မတတျနိုငျခဲ့ဘူး
ဒါကွောငျ့ သူ့သားကို ဘာမှမလုပျပေးနိုငျမယျ့အစား ဘာသာရေး အဆုံးအမတှကေို မိခငျဖွဈသူဟာညတိုငျး ဖတျပွခဲ့ ပါတယျ
ဒါကွောငျ့လဲ သူဟာကြောငျးမနရေပမေယျ့ ကြောငျးနရေတဲ့ ကလေးတှထေကျ ပိုသိ ပိုတျောခဲ့တယျသူက ဟာသဉာဏျလဲ အရမျးရှငျတယျ ။
သူက ရပျကှကျထဲမှာ လူခဈြလူခငျ ပေါသလို သူ့ရဲ့ အမွဲပွုံးနတေတျတဲ့ သူ့မကျြနှာလေးကို ခဈြလို့သူ့ကို အမွဲ စားစရာ ဝတျစရာတှေ ပေးတတျကွတယျ
ဒါကွောငျ့လဲ သူ့မိသားစုဟာ အစားအသောကျ ခြောငျလညျခဲ့ သလို မိခငျဖွဈသူရဲ့ အပျခြုပျလို့ ရတဲ့ငှကေလဲ အိမျအတှကျ အထောကျအကူ ဖွဈခဲ့တယျ
သူက ထူးခွားတယျ ။ သု့ထကျ အငျအားကွီးတဲ့သူတှေ သူ့ကို အနိုငျကငျြ့ရငျတောငျ အပွုံးနဲ့ အမွဲတုနျ့ပွနျ တတျတယျ သူကြောငျးမနရေ ပမေယျ့ သူ့ညီမတှကေို ကြောငျးတကျခှငျ့ရဖို့ အသကျ ၁၀ နှဈ ကောငျလေးက ရုနျးကနျခဲ့တယျ
သူ့မောငျနှမတှေ ကြောငျးတကျခဲ့ရတယျ ။ သူမနရေပမေယျ့ သူ့ညီမလေးတှေ ကြောငျးတကျရလို့ သူအမွဲပြျောပွီး ရပျကှကျထဲ သူ့ညီမစာတျောတဲ့အကွောငျး အမွဲကွှားလုံးထုတျတတျတဲ့ ကိုလလေုံးပေါ့
ဒီလို သူပြျောနလေေ မိခငျဖွဈသူက ခံစားရလေ နောကျဆုံးသူ့ကို မိခငျဖွဈသူက ဘုနျးတျောကွီးသငျပညာရေးကြောငျးကို ပို့ခဲ့ပါတော့တယျ ။
” မိသားစုထကျ နငျ့ကိုယျနငျလဲ ဘဝမှာ ပြျောအောငျ ရုနျးကနျရမယျ ။ နငျ လူတျောမဖွဈရငျတောငျလူဆိုး တယောကျတော့ ငါအဖွဈမခံနိုငျဘူး ။ နငျ့အတှကျပဲနငျတှေးပါ ။ ”
” အမရေဲ့ အဲ့ဒီအခြိနျကစကားကို ကတြျောခုထပျထိမှတျမိသေးတယျ
မှတျမှတျရရ ပေါ့ကတြျော ဆရာတျောဆီမရောကျခငျညမှာပေါ့
အမကေသူငိုတာကို သားသမီးတှကေို ဘယျတော့မှ မသိစခေငျြတဲ့လူ
သားသမီးတှရှေမှေ့ာ အမကေ အမွဲတမျး ရှတေ့နျးကစဈသူကွီးတယောကျလို မကျြနှာထားနဲ့ပဲ ဆုံးမ ပေးတတျတယျဗြ ။
ဒီကြောငျးကကောငျးတယျ ။ သငျတနျးမှာတျောတဲ့ ကလေးတှရေဲ့ မိသားစုကိုပါ ထောကျပံ့ပေးတယျ ။
#ဂကျြလီဟာသိုငျးပညာမှ ငယျစဉျထဲက ထူးခြှနျခဲ့သလို သူ့လကျဦးဆရာတျောကွီးကပါ အံ့သွခဲ့ရတဲ့ကလေး တယောကျပါ ။ ၁၃နှဈသားမှာ အလတျတနျး သိုငျးကမျြးစာအုပျ ၁၈ အုပျကို သူတတျခဲ့ပွီ ။ဒါက ကလေးတယောကျအဖို့ တျောတျောမလှယျတဲ့ ကိစ်စကွီးပါ ။
ညီမဖွဈသူကို ကြောငျးကောငျးကောငျး ပွောငျးထားခငျြလို့ ဂကျြလီဟာသိုငျးသငျတနျးကခှငျ့မပွုတဲ့သိုငျးပွိူငျပှဲတှကေို ဝငျပွိုငျခဲ့ပါတယျ ။ သူဆုတှရေတယျ ။ ဒါကွောငျ့လဲဆရာတျောရဲ့ကွိမျလုံးကသူ့အတှကျမိတျဆှဖွေဈခဲ့ သလို ဆရာတျောကမနိုငျတဲ့အဆုံး သိုငျးပွကှကျ ပွိုငျပှဲတှကေို ဂကျြလီအားဝငျပွိုငျခိုငျးစခေဲ့ပါ တော့တယျ ။ သူအဲ့မှာလဲဆုတှရေတယျ ။
သူတို့ဘုနျးကွီး ကြောငျးကိုရုပျရှငျအဖှဲ့တှလောရိုကျကွတယျ။နဂိုထဲကဟာသဉာဏျရှငျတဲ့ဂကျြလီကအပွေးအလှားကွညျ့ခဲ့တယျ။သူဘာဖွဈခငျြမှနျးသူ့ကိုယျသူမသိတဲ့ဂကျြလီဟာ ဟာသသရုပျဆောငျတယောကျအိမျမကျကိုမကျခဲ့ပါတော့တယျ။
သူဟာသမငျးသားအရမျးဖွဈခငျြခဲ့ပွီ။ ခြာလီခြာပလငျနဲ့နေးမတျကိုအရမျးရူးသှပျတဲ့သူက ရုပျရှငျပိုးထညျ့ပေးဖို့ဒီရိုကျကှငျးကစတငျခဲ့ပါတော့တယျ။
ဒီအခြိနျမှာဟောငျကောငျမှာသူအရမျးအားကတြဲ့သူတ ယောကျကလဲလူမသိသူမသိနရောကနဟောသအကျရှငျလေးတှပေါနရေပွီ။သူအားကတြဲ့သူကကတော့တခွားသူမဟုတျဘူး ဂကျြကီခမျြးဆိုတဲ့ရိုကျကှငျးကတောကျတိုမယျရကောငျအဆငျ့ပဲရှိသေးတဲ့သူပါပဲ။
#ဂကျြကီခမျြးဆိုတာဘာကောငျမှနျးလူတှမေသိသေးခငျအတိုအစဘဝထဲကဂကျြကီခမျြးက ဂကျြလီရဲ့ Idolတယောကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ဒါကွောငျ့ပဲ#ဂကျြလီဟာ ရုပျရှငျလောကထဲကိုတိုးဖို့ဆရာတျောနဲ့မိခငျအတှကျစာတစောငျခနျြပွီး ဘုနျးကွီးကြောငျးကနခေိုးထှကျခဲ့ပါတော့တယျ။
” အမေ သားအတှကျမစိုးရိမျပါနဲ့သားဘာဖွဈခငျြလဲသိပွီအမပွေောတဲ့လူကောငျးတယောကျဖွဈတဲ့တနအေ့မကေို့ကတြျောလာရှာပါ့မယျ”
ဒီစာလေးဟာယနအေ့ခြိနျထိအမရေိက ကဂကျြလီရဲ့နအေိမျမှာကပျထားဆဲပါ။သူစပွီးရောကျလာတာက ဟောငျကောငျမွိူ့ပျေါ။သူဘာလုပျလဲဆို ရုပျရှငျအဖှဲ့တခုကစကျအထမျးသမားဒီကနေ စတနျ့အစားထိုးသမားတယောကျအဖွဈသူနရောရလာခဲ့တယျ။
သူ့ရဲ့Talentကိုမွငျသှားတဲ့သူက သိုငျးကားတှရေိုကျတဲ့ခြောငျရှီရနျဆိုတဲ့ ဒါရိုကျတာတယောကျ။ဒီအခြိနျမှာသူ့အသကျ၁၇ပဲရှိသေးတယျ။ ဒီလိုနဲ့ဗီဒီယိုကား၂ကားကိုသူနဲ့ရိုကျခဲ့တယျ။ဒါပမေယျ့ရာဇဝငျကား။လူမသိပဲပွီးသှားတယျ။ဒါပမေယျ့ခြောငျရှီရနျကဇှဲမလြော့ဘူး။
ဘာကွောငျ့လဲဆို သူ့ကိုကနျထုတျလိုကျပွီးတခွားဒါရိုကျတာတယောကျနဲ့မငျးသားတ ယောကျကိုနရောပေးခဲ့တဲ့ Shoungshim ဆိုတဲ့ထုတျလုပျရေးကိုသူအနိုငျရခငျြတယျ။ဒါကွောငျ့ ဂကျြလီကိုပဲသူမငျးသားတယောကျအဖွဈတငျပွီး The Shaolin Temple ဆိုတဲ့ကားကိုရိုက်ခဲ့ပါတော့တယျ။
ဒါကဂကျြလီရဲ့ပထမဆုံးရုပျရှငျကား ဖွဈလာသလို ဟောငျကောငျဒျေါလာ ၁၇သနျးအထိရခဲ့တဲ့ရှောငျလငျသိုငျးကားပါပဲ။
ဒီကားရိုကျတော့ဂကျြလီအသကျ၁၉နှဈပဲရှိပါသေးတယျ။ဒီသတငျးကတရုတျပွညျမကွီးအထိတကျခဲ့သလို မိခငျဖွဈသူဟာလဲအံ့သွခဲ့ရပါတယျ။ဒီကားကရတဲ့ငှနေဲ့ မိခငျဖွဈသူကိုTV တလုံးဝယျပေးခဲ့သလိုအိမျခနျးခအကွှေးတှကေိုလဲသူဆပျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီကားအပွီးမှာပဲ ခြောငျရှီရနျကဂကျြလီကို ဒုတိယကားဆကျရိုကျဖို့လုပျပွနျတယျ။ဂကျြလီကဟာသ မငျးသားပဲဖွဈခငျြတာ။ဒါပမေယျ့သူရတဲ့ နရောကနဘေယျလိုcharacterဖွဈဖွဈသရုပျဆောငျနိုငျရမယျလို့သူ့ဆရာခြောငျရှီရနျကအမွဲဆုံးမလရှေိ့တယျ။
” မငျးသားဖွဈဖို့ကလှယျတယျ သရုပျဆောငျဖွဈဖို့က ခကျတယျ ။ ပိုကျဆံ+ရုပျ+ အဓိကနရော ဒီ ၃ ခုပေါငျးရငျမငျးသားဖွဈနိုငျ ပမေယျ့ သရုပျဆောငျဖွဈဖို့ကတော့ ဒီထကျအဆ ၁၀၀ မကတဲ့အခကျြတှလေိုအပျတယျ ။ မငျးသားတှပေေါတဲ့ ခတျေမှာသရုပျဆောငျတယောကျပဲ ဖွဈခငျြပါသား ”
” ဒီစကားက ကတြျောဒီနဂေ့ကျြလီဖွဈလာဖို့အရေးပါဆုံးဆိုမမှားဘူးဗြ။ ဆရာ့ရဲ့စကားကကတြျော ဟာသ အရံ ဇာတျပို့ဗီလိနျဘယျနရောဖွဈဖွဈသရုပျဆောငျရဲဖို့အားဖွဈစခေဲ့တယျ။ဟုတျတယျ ကတြျောမငျးသားဘယျတော့မှမဖွဈနိုငျပါဘူး။ ကတြေျာ့မှာမငျးသားဖွဈဖို့အခကျြတှအေစထဲကမရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့သရုပျဆောငျတယောကျဖွဈဖို့တော့ ယုံကွညျမူအမွဲရှိခဲ့တယျ။”
မီတာခတွေ ပိုကျနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မဒီလိုသုံးပါတယ် (လစဉ် ၅၀၀၀၀ ကျော်ကနေ ၂၅၀၀၀ ကျော်ပဲကျပါတယ်)